Computer Technical Notes & Sharing Softwares: October 2012
Gmail Hacking နှင့် ပါတ်သက်၍
1.Fake Login Pages
5.spywares or u can say tht malicious activeX... or scripts.
1. Fake Login Pages ဆိုတာကတော့ Phishing နည်းပညာတစ်ခုပဲ.. ၄င်းကို XSS, Social Engineering နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင်ပိုပြီး အစွမ်းထက်တယ်...
စမ်းသပ်ရန်နေရာ http://www.planetcreator.net/tutorial/Fake Login/Gmail.htm
စမ်းသပ်ထားသော Password ကိုကြည့်ရန် http://www.planetcreator.net/tutorial/Fake Login/FakeLoginPasswords.htm
2.Cookie Stealing ဒါကတော့ အကယ်၍ မိမိက Mail တစ်ခုကို login ၀င်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ
မိမိရဲ့ Session ID, Cookies တွေကို Browser ကိုပို့ပါတယ်... ဒါကတော့ မိမိက ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာဝင်ခဲ့တယ်.. သုံးခဲ့တယ်..ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဒီ Website, ဒီ mail ကိုသုံးတယ်ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတင်တာပါ။ ဒီလို Cookies တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခိုးလို့ရပါတယ်။ cookie stealer တွေအများကြီးရှိပါတယ်..
for(var i = 0; i != document.links.length; i++)
if(document.links[i].href.search(\_"mail.google.com\_") != -1)
document.links[i].href = document.links[i].href.replace(\_"http\_", \_"https\_");
}ဥပမာ hamster (local wireless)
Hamster ဆိုတာလဲ Session ID and Cookies ခိုးတဲ့ Tool တစ်ခုပါပဲ။
3.Trojans ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်.. မိမိရဲ့ စက်ထဲက information တွေကို ရဖို့အတွက် Attacker တွေက ကြိုတင်ရေးသွင်းထားတဲ့ programming code တွေပါပါတယ်...
ဥပမာ- အပေါ်က topic ပိုင်ရှင် ပေးထားတဲ့ website လိုတွေမှာ Trojans တွေထည့်သွင်းထားလို့ရပါတယ်.. အခုပဲကြည့်လေ.. ဖွင့်လိုက်ရင် :
HEUR:Trojan.Script.Iframer ဆိုပြီးတော့ ပေါ်ပါတယ်.. ဒါမျိုးတွေကိုတော့ ရှောင်ပါ။ မရှောင် နိုင်က လုပ်ပါ။ :D
4.key loggersakeystroke logger, key logger ဆိုတာ Hardware Device နဲ့ Software program ဆိုပြီးရှိတယ်။ System Unit နဲ့ Keyboard ကြားဖြစ်စေ keyboard နဲ့တွဲ၍ ဖြစ်စေ သေးငယ်တဲ့ battery ပါဝင်တဲ့ keylogger device ကိုဝှက်ထားနိုင်တယ်.. software အခြေခံတဲ့ keylogger ကတော့ ဒီလို Physical ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ပိုစရာမလိုဘူး။
5.spywares or u can say tht malicious activeX... or scripts. ဒါကလည်း ဟိုအပေါ်က hamster, cookielogger တွေနဲ့ မကွာပါဘူးအကုန်တူပါတယ်.. မတူတာက based software လေးပါ။ Attacker ရဲ့ site ကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အလိုအလျောက်သော်လည်းကောင်း။ ဒါမှမဟုတ် pop up ကလေးတစ်ခုပြပြီးတော့ ဒီ site, ဒီ file ကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် pop up , active x ကို allow လုပ်ပါ ဘာညာပေါ့..
2008 အကုန်ပိုင်းလောက်ကလဲ Adobe ရဲ့ Flash Player ကိုအခြေခံပြီးတော့ Spyware and Trojans တွေ ပေါ်လာခဲ့ဖူးပါတယ်... ဆိုလိုတာက
website တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ site ရဲ့ အပေါ်ဆုံးနားမှာ မင်းက ဒီ site ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် adobe flash player ကို install လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ မေးပါတယ်.. sex video site တွေဆိုရင် ပိုပေါပါတယ်...
6.packet catching တူပါတယ်ဆိုမှ နောက်တစ်ခု ဆင်တူရိုးမှားလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ဒါက Wired အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ အသုံးပြုတဲ့နည်းပါ။ Cain and Abel (Cane and Cable မဟုတ်ပါ) ကိုနမူနာကြည့်လို့ရပါတယ်.. www.oxid.it/cain.html
Posted by SLIP at 12:17 PM 1 comments